Mabhaisikopu Kuwedzera muBelkıs - RayHaber
mushaTURKEYSoutheastern Anatolia Region27 GaziantepMabhaisikopu Kuwedzera muBelkıs
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Southeastern Anatolia Region, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, TURKEY 0
pamwe mabhazi anomiswa achawedzerwa
Gaziantep Metropolitan Meya Fatma Sahin, Belkis Dunhu reSehitkamil mudunhu vakaenda kunoshanyira vavakidzani. Sahin, kuitira kuti agadzirise dambudziko rekusakwana kwemabhazi muchikwata chevavakidzani, Belkis akakumbira kutanga kuedza kuwedzera bhazi munzvimbo iyi.
Vachitaura vaine zita redunhu rezvemagariro, Fatma Şahin akaramba achishanyira vavakidzani kuitira kuti vaone matambudziko munzvimbo uye vateerere vagari. Kuongorora matambudziko ari munharaunda muhtars sachigaro Şahin, gadziriso-yakatarisana yezvinetso kugadzirisa nzira zvakare yakasimbisa chigaro mumoyo yevagari.
Mesaisine, Şehitkâmil Belkıs Dunhu reruwa, kutanga kubva kuSahin, basa rese rakaitwa panzvimbo-yakaongororwa, pamwe nekuona kushomeka kwenharaunda, timu yakapa mirayiridzo yekubvisa kusakwana.
Kufungisisa kwebasa rakapedzwa mukutaurirana nemukuru wepamusha Enver Özekici'yle Sahin, hushamwari hwevavakidzani hwekushomeka uye nekuda kwekukura kwemiganhu yenharaunda isina kukwana kupindura kuchishuvo chekuwedzera huwandu hwemabhazi, akakumbira timu kuti itange basa kugadzirisa dambudziko iri. Mukhtar Özekici'yi anotarisa akamira padivi pemutungamiriri, mota inofarira zvikuru vagari vakamirira mota, vakataura netsoka.
Belkis yakavakidzana kwemakore mazhinji kugadzirisa kushomeka kwemvura, nekutenda Mutungamiriri Fatma Sahin nekuita kwake muvagari vemuvakidzani, asphalt nekupedza basa munharaunda ichagadziriswa nekupedza kushomeka, akadaro.
Kuwedzerwa kweTram kunomira muGaziantep Kunowedzera Passenger Capacity 14 / 01 / 2018 Kuwedzerwa kwezvigadziri mumitambo inoshandiswa neGaziantep Metropolitan Maguta Gaziulaş uye kuwedzera kwemotokari kwakawedzera mutakuri wevanhu. Kutenda kuwedzera kwekuwedzera kunokonzerwa nekuwedzera kwekumisa uye kushanda kwemotokari dzinofamba panzira yezvitima, kuwedzera kwenhamba yevatakuri vanosarudza tramway yakawedzera. Izvo zvakanzi zvakare kuti dzimwe nzira dzekutakura dzakanaka dzakapiwa nezvidzidzo. Maererano neshoko revakuru veGaziulaş; Nhamba yepamusoro yengoro yakashandiswa mumakumbo e2017. Nenzira iyi, mutapfigiro wevatakuri akavandudzwa. Mugore re 38, vakuru veGaziulaş vakati nhamba yemotokari dzemazuva ose dzakanga dzakarongedzwa kuti dzikwire kumusoro kwe2018 laş
Kuwedzera kukurudzirwa kumakambani emabhazi muGermany 24 / 04 / 2014 dzichiri njanji chindingindingi muGermany amuka nebhazi makambani kusimudzira: kure kufamba mu Germany kubvira 2013 German Railways (db) zvichitevera kupera chindingindingi ari kuona kuwedzera nebhazi kufamba. Paavhareji, kana ichienzaniswa nerwendo rwechitima, zvishoma pasi pekufamba kwebhasi ye50 zvinowanzoonekwa mukati meguta guru. Aive pakati pematunhu akakurudzira makambani ebhasi kuBaden-Württemberg (BW). Gore rino, huri hutungamiri hwekutakura huri kusanganisira kambani yebhasi ye73 muhuwandu hwekukurudzira. Izvo zviyero zvinokurudzira zvichasvika 5 mamiriyoni emaore gore rino. Zvinokurudzira zvichasiyana pakati pe17 bin 500 ne157.500 Euro zvichienderana nemamiriro emakambani. Zvichida motokari inofambidzana nehupenyu kana kwete ...
Izmir, Winter Timetable, Bus uye Metro Expeditions Kuwedzera 19 / 09 / 2016 Winter Schedule, Bus uye Metro Schedules muIzmir Kuwedzera: İzmir Metropolitan Municipality ESHOT General Directorate uye İzmir Metro A.Ş, nekutangwa kwezvikoro 19 September, nguva yechando inotangira kuMuvhuro. Kuwanda kwebhazi uye gwagwa repasi rino kuwedzera. ESHOT General Directorate uye İzmir Metro A.Ş vakagadzirisa purogiramu yacho nekufungisisa kuwedzera kwekuwedzera uye maawa ekudzidzisa kwezvikoro nekutangwa kwezvikoro musi wa 19 September. Saizvozvowo, bhasi re1286 rakawedzerwa kubhasi ye186, iyo iri kuitika panguva ino, uye nhamba yemabhasi parwendo rwakawedzerwa kusvika ku1472. ESHOT General Directorate Mahofisi ezuva re 15 mutsva yebhazi bhasi yakauya kuguta de
Nguva dzebhasi muKonya dzakashanduka! Basa reTram rakakura 12 / 06 / 2017 Nguva dzebhasi muKonya dzakashanduka! Huramiro yeTram yakawedzera: Konya Metropolitan Municipality, nguva yebhasi kuenda kundoronga husiku hunoenda kumatokari anozivisa kuwedzera kwetami. Chiziviso chinobva kuConya Metropolitan Municipality Dhipatimendi Rekutakura uye Rail Systems inotevera: :: 12 Kubva munaJunevhuvhu Muvhuro, yose yemigwagwa yebhazi yakagadziriswa zvakare. Nhepfenyuro idzva dzinoparidzwa kubva pamitengo yekutengesa uye www.konya.bel.tr web address. Zvakare, 12 June kubva Monday Seljuk District of Bosnia and Herzegovina, Kosovo uye Sandzak munharaunda kuti hubudirire uye vakarongeka chokufambisa mabasa nechinangwa 58 mutsetse No. kubudirira 'Bosnia and Herzegovina Tramway Drive Line' kubva bhazi nzira ...
Shanduko Shanduko Inoshanda Yakatangwa kuAltnnkayı Boulevard
Kuwedzerwa kweTram kunomira muGaziantep Kunowedzera Passenger Capacity
Kuwedzera kukurudzirwa kumakambani emabhazi muGermany
Izmir, Winter Timetable, Bus uye Metro Expeditions Kuwedzera
Nguva dzebhasi muKonya dzakashanduka! Basa reTram rakakura
Chinhu cheHaan Mountain chichawedzerwa
Russian State Railways 'charter capital ichawedzerwa ne13 mabhiriyoni ebhururi
Nhamba yevashandi vekutya zvekutya ichawedzerwa muIstanbul
Hapana Bhani Putaidzo muTram, Metrobus uye Bus Stations
Dzidzisai matanho pamabhazi emabhasi